कालो चना खानुका फाइदाहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
चना त हामी सबैले खाएकै छौं । चनाको छोले होस् अथवा चनाको दाल अथवा चनाको वेसनबाट बनेका परिकार नै किन नहुन्, हामीले प्रायः खाइरहेकै हुन्छौं । तर, के तपाईंको डा’इटमा का’लो चना समावेश छ त ? हजुर, भिटामिनहरुको ख’जाना हो कालो चना । यो रेसादार हुन्छ, भिटामिनको साथै खनि’जहरुले भरिपूर्ण हुन्छ र यसमा चि’ल्लोपना कम मात्रामा हुन्छ । यसलाई डा’इटमा समावेश गर्नु तपाईंको स्वास्थ्यका लागि निकै नै फाइदाजनक सावित हुनेछ ।
कालो चना खानाले क्लोरोफिल, भि’टामिन बी, भिटामिन सी, भिटामिन डी तथा भि’टामिने केका साथै फो’स्फोरस, पोटासियम, ग्याग्निसियमको आवश्यकता पनि पूरा हुन्छ । यसबाहेक, यसको ग्ला’इसेमिक इन्डेक्स पनि कम हुन्छ । कालो चनाले तपाईंले परफेक्ट बडी शे’प पाउन सक्नुहुनेछ । का’लो चनाको नियमित सेवनले म’धुमेहमा नियन्त्रण आउनुका साथै श’रीर समेत म’जबुत हुनेछ ।
कालो चनालाई तपाईंले शख्खरसँग खानुभयो भने अझै बढी फा’इदाजनक हुनेछ । का’लो चनाले हाम्रो श’रीरमा उर्जा मिल्छ । खासगरी जाडो मौसममा मानिसहरु शख्खरसँग का’लो चना खाने गर्छन् । का’लो चना फाइबरले भरिपूर्ण हुन्छ । यसले पाचन प्रकृयालाई दुरुस्त गर्छ । राति पानीमा चना भिजाएर राख्नु पर्छ र बिहान त्यसलाई खानुपर्छ । त्यसो गर्नाले तपाईंलाई निकै नै फाइदा पुग्नेछ । कब्जियतको समस्या पनि टाढा हुन्छ । साथै जुन पानीमा चनालाई भिजाइएको हुन्छ ।
त्यो पानी समेत स्वास्थका लागि फाइदाजनक हुन्छ । कालो चना एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्थोसाइनिन, फाइटोन्यूट्रियन्ट्स तथा एएलएले भरिपूर्ण हुन्छ । त्यसले मु’टुको बि’रामीहरुलाई टाढा राख्नुका साथै र’क्त न’लीहरुलाई स्व’स्थ राख्नमा फाइदाजनक हुन्छ । साथै यसलाई फो’लेट तथा म्याग्नेसियमको पनि राम्रो स्रोत मानिन्छ । जुन हार्ट एट्याक तथा स्ट्रोकको खतरालाई कम गर्नमा समेत सहयोगी मानिन्छ । म’धुमेहका रोगीहरुका लागि कालो चनाको सेवन गर्नु निकै नै फाइदाजनक मानिन्छ । यसमा भएको का’र्बोहाइड्रेट बिस्तारै पच्छ । जसका कारण ब्ल’ड सु’गरको स्त’रलाई कम गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले, यसले इन्सु’लिन प्रतिरोधमा योगदान दिनसक्छ र टाइप २ म’धुमेहको ख’तरालाई पनि स’माप्त गर्नसक्छ । कालो च’नामा घुलनशील फाइबर हुनाले यो कोलेस्ट्रोलको लेभललाई कम गर्न समेत स’क्षम हुन्छ ।गर्भवती तथा स्तनपान गर्ने महिलाहरुका लागि कालो चना निकै नै फाइदाजनक हुन्छ । किनभने यसमा प्रचुरमात्रामा आइ’रन हुन्छ । यसबाहेक यसले एनि’मियालाई रोक्न समेत सहयोग पुर्‍याउँछ । बढ्दो उमेरका बालबालिकालाई पनि यो निकै फाइदाजनक हुन्छ ।कालो चनामा फोलेट्स, आ’हार फाइबर, प्रो’टीन, कार्बोहाइड्रेट, क’पर, आइरन तथा फोस्फोरस पाउन सकिन्छ, जसले छा’लालाई फाइदा पुर्‍याउँछ। चना भिजाइएको पानीले अनुहार धोयो भने अनुहारमा चमक आउँछ । (urlabarinews.com बाट सभार)